DEREZA CAADIGA AH (GOJI BERRY): BEERASHADA IYO DARYEELKA EE GOBOLKA MOSCOW - SOOSAARKA DALAGGA
Sida loo koro berry goji ee xaafadaha
Xaaladaha cimilada ee gobolka Moscow waa ku haboon tahay barbarumka caadiga ah ee sii kordhaya ama, sida warshadani sida caadiga ah loo yaqaano adduunka, goji berry. Hadda way adag tahay in la helo nin aan la maqlin miraayadda goji miraha. Waxay ka caawiyaan ma aha oo kaliya miisaan lumis, laakiin sidoo kale waa bogsiiye aad u fiican ee cuduro badan, waxaa ku jira tiro badan oo ah xubno waxtar leh. Iyo tan ugu muhiimsan - uma baahnid in ay eegaan dukaamada, laakiin waad isbeddeli kartaa adiguna way sii deyn kartaa jirkaaga sanadka oo dhan.
Goji ee Shiineys macnaheedu waa "dereza", waxaana loogu yeeraa dadka. Warshadda waxaa iska leh qoyska Solanaceae. Dereza waa geed qani ah oo koraya oo koraya ilaa 3 mitir.
Laamihii baadiyaha waa cufan caleemo yaryar iyaga oo koraya. Reizuusku wuxuu koraa caleemaha xooggan ee dhulka hoostiisa.
Waa muhiim! Noqo mid aad u taxadar leh, sida miro goji ayaa dhegi kara dhiigga. Taasina waa sababta aan lagula talin inay qaadaan dadka u nugul dhiigbaxa. Tani waxay keeni kartaa waxyeelo weyn qof ama, kiis ugu xun, keena dhimasho.
Haddii aad bilawdo inaad googoosho beerta goji ee guriga, ka dibna wakhti ka dib waxay noqon doonaan kuwo badan oo lagu qurxiyo: laamuhu wuxuu noqonayaa tinge jilicsan oo qurux badan, caleemuhu waxay noqon doonaan kuwo cagaar ah oo caleemo buluug ah ka hooseeya.
Wankers yare xannaaneeyayaasha waxay jecel yihiin laga bilaabo Juun ilaa Oktoobar. Ubaxyada waxay ku qaadaan haraag casaan ah oo guduudan mugdi madow waxayna leeyihiin jilicsanaan, jilicsanaan leh.
Marka berry ay u bislaadaan, waxay si buuxda u dhejinayaan laanteeda, waxay leeyihiin qaab aad u dheer iyo midab casaan leh. Celceliska dhererka miro waa qiyaastii 2 cm. Geedka wuxuu bilaabmaa inuu midho dhasho seddex sano kadib markii la beero.
Sida loo doorto geedo marka la iibsanayo
Had iyo jeer si taxadar leh u dooro geedo mustaqbalka dhirta, maxaa yeelay doorashadaada waxay saamayn doontaa goosashada oo dhan sanadaha soo socda.
Trust kaliya iibiya iibiyo, iyo ka sii fiican - soo iibsato geedo ee xanaanada. Sidaas darteed waxaad si buuxda ugu kalsoonaan kartaa tayada kala duwanaanta.
Muuqaal muhiim ah waa joogitaanka tag gaar ah oo leh magaca kala duwan ee ku xiran seedling laftiisa.
Goolasha geedaha geedka ayaa u baahan in la iibsado iyadoon caleemo ku jirin. Inkasta oo ay u muuqato in baadiyaha yar yar ee caleemaha cagaaran ay u wanaagsan tahay in la doorto, wali waa fikrad qaldan, iyo noocan oo kale ah seedling wuxuu ku noolaan doonaa waqti aad u gaaban.
U hubso inaad si taxaddar leh u fiirsato xididada, aysan kiisku noqon karin qalalan. Warshad waxaa si fiican ugu iibsaday buro yar oo dhulka ah.
Hubi geedo goji ah raadinta cayayaanka ama cudurada.
Waxa kale oo aad ku kori kartaa xayawaan kale oo miro ah xagaaga xagaaga: actinidia, blueberries, raspberries, miskaha kacsan, buckthorn badda, physalis, currants black iyo red, honeysuckle, blueberries.
Adigoo raacaya tilmaamahan fudud, waxaad dooran kartaa geedo caafimaad leh oo tayo sare leh, kaas oo dhawr sano lagu farxi doono goosashada qani ku ah.
Xulashada iyo diyaarinta goobta
Berry Goji waa ugu wanaagsan ee ciidda alkaline ku habboon, laakiin waxay ku koraan karaa wax kasta oo ciidda. Dooro meel meesha qadarka iftiinka qorraxdu dhacdo, iyo biyaha ma istaagaan.
Si aad u diyaariso meel beeritaanka seedling ah, qodo dalool 50-60 cm oo ballaaran oo 40 cm qoto dheer marka marka la beerto dhowr duurka, godadka meel fog oo ah 1.5-2 mitir kasta oo kale.
Wixii koritaanka iyo horumarka dhirta, ku shub 200 g ee superphosphate, iyo sidoo kale 9-10 kg ee humus iyo 40 g oo qoryo qoryo galay godka, isku daraan oo dhan.
Talaabooyinka Talaabooyinka Tallaabo-tallaabo ah
Haddii aad xiiseyneyso sida goji goji la koray, oo aad rabto in aad taas ku samayso gobolka Moscow, ka dibna tilmaamaha faahfaahsan ee beeritaanka geedkan ayaa lagu sharxay hoos.
Geedo ayaa labadaba laga iibsan karaa dukaanka, oo aad naftaada u koraan. Abuur Goji si dhakhso leh u dhaqso oo uma baahna daaweyn. Ku qoy iyaga ka hor inta aanad ku dhicin xalka "Zircon" ama "Appin" oo sug ilaa dhowr saacadood. Xulo ciid dhexdhexaad ah, oo la yiraahdo acidity dhexdhexaad ah.
Ma taqaanaa? Isbahaysiga Tibetan ayaa wali ku tuuraya cawska goji ceelasha, kuwaas oo ay cabbaan biyo. Waxay aaminsan yihiin in bogsashadooda iyo dib u soo kabashada guryaha, kuwaas oo ah fure u ah fayoobkooda iyo mudnaanta.
Wixii geedo ah, dooro meel diiran oo koronto meel ay u fududahay in lagu hayo qoyaanka lagama maarmaanka ah iyo heerkulka. Iska ilaali qorshe ama kululeyn ilaha kala duwan ee kuleylka.
Marka geedo ay soo baxaan, ku rid meel yar oo madow ah, ka dib muuqaalka caleemaha cagaaran waxaad ku beeran kartaa dherado kala duwan oo ku saabsan 7 cm qoto dheer, sidaas darteed waxay noqon doontaa mid ku habboon xididada sababtoo ah koritaankooda degdeg ah.
Marka seedling diyaar u ah in la beeray dhulka, si habboon u diyaariso dalool ah, sida kor ku sharaxay. Ku qodb baadiyaha diyaarka ah markaad beerto, ku shub biyo si fiican oo googooto leh peat. Haddii aad koraan berry goji ka soo abuurka, waxay ku Bloomi doonaa sanadka labaad, laakiin waxay siin doonaa miro saddexaad ama afaraad.
Waxaa fiican inaad geedo geedka guga gasho marka heerkulka hawadu ka sarreeyo 20 ° C, xilliga dayrta, tan laguma talin, maadaama aan khatarta sare ee dhimashada xilliga qaboobaha.
Ma taqaanaa? In Shiinaha, berry goji waxaa loo isticmaalaa sidii warshad qashin ah. Qiyaaso iyo qiyaaso go'an, waxaad si fiican u isticmaali kartaa caleemaha, jilif, berry ah ee diyaarinta cabitaanka daawooyinka iyo daroogooyinka.
Marka la eego xaaladaha cimilada ee gobolka Moscow, waxaa lagu talinayaa in ay ku beertaan baadiyaha marka hore ee lagu koriyo, kaas oo ay tahay in lagu hayn muddo 6 bilood ah.
Bilaha ugu horeeya ka dib marka la beerto, waxaa jira horumar aad u gaaban ee seedling. Gaar ahaan, geedka waxay la mid tahay baadiyaha yaanyada, laakiin si tartiib tartiib ah ayuu u koraa, iyo dhererkuna waa 80 cm.
Marka uu kobcayo, caleemaha cagaarku waxay u muuqdaan, ubaxu wuxuu bilaabmaa foomka ubaxyada casaanka ah iyo midab madow oo haynaya ilaa barafka ugu horeeya.
Sida loo daryeelo
Daryeelka ugu muhiimsan ee berry goji sanadka ugu horeeya ee nolosha. Waa muddadan muddada geedka ay tahay mid aad u nugul oo soo wajahda khataraha deegaanka ee kala duwan.
Labadii sanno ee ugu horeysay ee warshadu waa kuwo isaga goosan kara. Sidaa u qaado si dhab ah.
Waa muhiim! Markaad waraabinaysid qoryaha, waxaa muhiim ah inaadan u ogolaanin ciidda in ay qalajiso ama dibedda ka soo baxdo. Rootiyada lihi waxay dhiman karaan qoyaan badan, gaar ahaan heerkulka hooseeya.
Waxaad isticmaali kartaa haraaga hoyga filim gaar ah inta lagu jiro muddooyinka dheeraadka ah ama roobabka. Markay qaan-gaarayso, geedku wuxuu u adkaysan karaa labada abaar iyo roob. Intaa waxaa dheer, waxaad u baahan tahay inaad biyo u hesho xilliga qoyan, haddii dhirta ay ku taal qorraxdu si toos ah.
Si ay u koraan geedo caafimaad leh, bacrimiya ciidda ka hor beerto geedo ku jira. Ka dib, in kasta oo guga ee xilliga gu'ga, codso compost iyo bacriminta gaarka ah organic leh content sare ee potassium, nitrogen iyo fosfooraska.
Haddii aad tahay ninkii beerta nudaha leh, waxaad iibsan kartaa isku darka diyaarinta ee bacriminta dukaanka khaaska ah. Compost iyo nafaqooyin kale oo macdanta ayaa diyaarin kara adiga.
Baro wax badan oo ku saabsan sifooyinka wanaagsan ee goji berry.
Kobcinta wolfberry waxay ku dhacdaa xawaare si deg deg ah, iyo ugu dhakhsaha badan dhirta waxay gaari kartaa height ah 3-4 mitir. Kajirinta baadiyaha waxaa la sameeyaa si loo kordhiyo soosaarista iyo hagaajinta muuqaalka.
Si arrintan loo sameeyo, ka saar laanta iskudhafka dheeriga ah, ka baxso kan ugu xooggan. Sameynta garabka midho waxay ku dhacdaa iyaga, ka dibna laamaha miraha waxay ka samaysan yihiin garbaha. Si aad u kicin kobcintooda, samee manjooyin sannadle ah oo laamaha, taas oo ka dhalatay taas oo ka dhalatay wax ka badan afar naasood mid kasta. Waxay sidoo kale noqon doontaa mid waxtar leh si loo dhiso qaabdhismeed taageero gaar ah baadiyaha si aan caleemaha u faafin dhulka.
Bannaanka u khibrad leh waxay ku talinayaan manjooyin joogto ah ee baadiyaha, sidaa daraadeed waxay noqon doontaa mid sahlan in la daryeelo. Tani, dabcan, waxay saameyn doontaa xaddiga beergooyska, laakiin berry ee kiiskan noqon doonaa mid aad u weyn. Taas waxay kor u qaadeysaa nuxurka nafaqooyinka faa'iido leh.
Berry Goji waa jiilaalka u adkaysta ku filan waxayna u dulqaadan karaan heerkulka ilaa -25 ° C. Si kastaba ha noqotee, xadhigaan waxaa lagama maarmaan ah in la siiyo hoy wanaagsan oo adoo isticmaalaya alaabta wax lagu tolay ama aan la taaban karin.
Mabda 'ahaan, miisaanka iftiinka ee geedka ma aha mid khatar ah, maadaama uu awood u leeyahay inuu dhakhso u soo kabsado iyadoo la kaashanayo caleemaha yar yar. Haddii aad wali ka cabsanayso dhaawaca barafka, baadiyaha geedka weel qoto dheer oo ku kaydi qolalka hoose ilaa guga.
Cudurrada iyo ka hortagga cayayaanka
Sidoo kale warshad kasta, cayayaanka qoryaha ayaa sidoo kale lagu xiraa cayayaanka iyo cudurrada kala duwan. Waxay ku xanuunsan kartaa saamaynta waxyeellada ah ee aphids, baradho baradho Colorado, siisay oo aan aboor ku jiilaalka. Marka aad la dagaalamayso dulin-naanahani waxay kaa caawin doonaan inaad faleebooto geedka.
Ma taqaanaa? Marka ugu horeysa ee ku saabsan goryaan goji waxaa laga helaa qoraalladii la xidhiidhay ilaa 650 BC. Oe., Halkaas oo lagu sharaxay daawada ugu fiican ee da 'wayn. Sidaa darteed halyeeyada ku saabsan sifooyinka aan caadiga ahayn ee bogsashada.
Haddii la abuurayo geedka yaryar ee goglan waxaa jirey ash ah oo qoryo qoryo la'aan ah, kadibna caleemuhu waxay muujin karaan calaamadaha cudurrada sida phytophthora ama unugyada budada ah.
Si looga hortago muuqaalkooda, ka taxadar tan tan bilawgii beerashada. Isticmaal ciidda alkaloojka ah oo kaliya oo ku dhaqma khafiifinta waqtiga khudaarta.
Ma taqaanaa? Waxaa jira cadaymo muujinaya hal deggan oo reer Himilada ah, kuwaas oo ku mahadsan isticmaalka maalinlaha ah ee berry, waxay ku noolaayeen 252 sano.
Kalluunka beeraha caadiga ah ee guriga waa shaqo caadi ah oo ka dhexjirta dadka degan gobolka Moscow. Cimilada aaggani waxay u fiicantahay koritaanka iyo horumarinta berry, taas oo mustaqbalka noqon doona caawiye aad u fiican iyo dhakhtarkaaga.
Si kastaba ha ahaatee, waa in la xusuusnaado in diiradda ee maaddooyinka waxtar leh ee dhirta sida aad u yar. Iyo haddii aad u isticmaasho si loo wanaajiyo caafimaadkaaga, markaa waxaa lagugula talinayaa inaad iibsato berry dhabta ah ee ku koray dalkiisa hooyo si waafaqsan dhammaan xaaladaha lagama maarmaanka ah.
Xidhan qurux badan oo ilaaliya! Boodhadhka boogaha
Sida loo ilaaliyo hadhuudhka guriga
Qaababka isticmaalka casiirka celery
Sida loo badbaadiyo walxaha beerto ee qaboobaha (gooyn) ka hor inta la beeri
Sida loo rakibo albaabbada qaybta
Isticmaalay gawaarida yaryar
Dayactirka bakaylaha ayaa weli ah meel caan ah oo xoolo ah. Waxaa lagu qiimeeyaa hilibka iyo maqaarka hindisada, iyo waxsoosaarkooda waxay u baahan yihiin daryeel joogto ah. Dukumiintiyadu waxay leeyihiin waxyaabo badan oo ka mid ah qalabka fududeeya, laakiin qalabka qaarkood ayaa laga sameyn karaa iyaga. Aan aragno sida loo sameeyo cabitaanada guriga ee bakaylaha. Read More
Waa maxay dahlias: kala saarista tusaalooyinka noocyada caanka ah
Ixia: Beerto iyo daryeelida ubax la mid ah